Mushandisi anogona kubvunza mhando yemakuki anoshandiswa neGoogle, Google+ Cookie neGoogle Mepu, zvinoenderana nezvakapihwa papeji ravo pamusoro pekuti rudzii rwemakuki rwavanoshandisa.
DoubleClick makuki haana ruzivo runogona kuzivikanwa. Dzimwe nguva cookie ine inowedzera chinongedzo chakafanana nechitarisiko kune iyo cookie ID. Iyi identifier inoshandiswa kuona mushambadzi wekushambadzira uyo mushandisi akambovhenekerwa kwaari.; zvisinei, DoubleClick haichengeti chero imwe mhando yedata kuki uye, uyezve, ruzivo haruzivikanwe pachako.
Social network cookies: Makuki anobva kumasocial network anogona kuchengetwa mubhurawuza rako kana uchitsvaga mavara epainternet.com semuenzaniso, kana iwe uchishandisa bhatani kugovera zvirimo zvemashoko e-instagram.com pane mamwe ma social network.
Own: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Ivo vanopera nguva yekupera kwechirongwa. Ivo vanochengeta ruzivo rwevashandisi uye zvikamu zvavo kuti vadzore ruzivo rwevashandisi.
mapofukraine.comDSIS- IDE-ID 30 mazuva Kuki iyi inoshandiswa kudzorera kunongedza, kufambisa zvakanaka, kuzivisa uye kutaurisa nezve kushambadzira kwepamhepo. DoubleClick inotumira cookie kubhurawuza mushure mekudhinda chero, kudhinda kana kumwe kuita kunoguma nekufona kune DoubleClick server. Kana iyo bhurawuza inogamuchira kuki, ino chengetwa mairi. Mamwe ruzivo
info (at) kutiza-room.online inoita kuti iwanikwe kune vashandisi vanoda kudzivirira kuiswa kwemakuki aya ambotaurwa, maratidziro anopiwa chinangwa ichi nevashambadziro avo kushandiswa kwavo kunoonekwa kwawanda.
Cookies mutemo yekupedzisira yakagadziriswa musi wa 20/05/2020